Sweden oo xuduudaha ka xiratay Norwey iyo saameynta Soomaalida. | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Sweden oo xuduudaha ka xiratay Norwey iyo saameynta Soomaalida.
Sweden oo xuduudaha ka xiratay Norwey iyo saameynta Soomaalida.
Masuuliyiinta dowladda Sweden ayaa ku dhawaaqday in la xiray dhamaan xuduudaha Sweden ay la wadaagto Norwey kadib markii gobolo ka mid ah Norwey laga helay Xanuunka cusub ee Karoona Feyrus ee markiisii ugu horeeyay lagu arkay dalka Biritish.
Arintaani oo horay loo saadaalinayay ayaa dhaqan geli doonta caawa saqda dhexe waxaana ay xuduudaha Norwey iyo Sweden kala xirnaan doonaan ilaa 14-ka febraayo ee sanadkaan.
Wasiirka Arimaha Gudaha Sweden Mikael Damberg ayaa sabtigii sheegay in ay xooga saari doonaan xayiraada isku socodka wadamada laga helay xanuunkaan cusub, iyadoo maalin kadibna go,aankaani uu dhaqan galay.
Talaabadaani ayaa soo dadajisay kadib markii xukuumada Norwey ay shalay xirtay goobo badan oo bariga Norwey oo ay ku jirto caasimada wadanka ee Oslo waxaana hay`adda Caafimaadka Sweden ay ka baqaneysa in dadka laga xiray goobaha Norwey ay u adeeg doontaan Sweden halkaasna uu ku faafo cudurka.
“Marka dukaamada adeega iyo dukaamada khamriga ee Norwey ay xirmaan, waxaa jirta khatar ah in noorwiiji u yimaadaan Iswiidhan oo ay ka qayb qaataan fiditaanka infekshinka iyo saxmadda halkan” ayuu yiri Mikael Damberg.
Qofkii dhawaan u safray Norwey ee tagay Sweden ayaa karantiil geli doona waxaana uu mari doona tijaabo caafimaad oo looga baarayo xanuunka Cusub halka kuwa Sweden degan ee Norwey u safrana lagu amray in ay dalka joogaan ilaa 14-ka Febraayo.
Raìsul wasaaraha Norwey Erna Solberg ayaa NRK u sheegtay sabtidii in Norwey lagu wargaliyay in la xirayo gelsita Sweden taaso oo looga dan leeyahay nidaam tijaabo ah ay soo bandhigi doonaan kooxda Sweden saqda dhexe ee habeenka Isniinta.
Arintaani ayaa saameyn badan ku yeelan doona soomaalida ku nool labada dal gaar ahaan kuwa degan Norwey kuwaasi oo inta badan Sweden ka doonan jiray adeega, inkasta oo mudooyinkii dambe ay Norwey xuduudaha Sweden xirtay, waxaana sidoo kale arintaani ay saameyneysa familada Soomaalida ee is qaba ee kala degan labada wadan.
Previous articleSomali soldiers killed by Al-Shabaab militants in large-scale attack
Next articleArsenal oo 2.8 milyan oo euro bixin doonta mushaarka Odegaard ilaa bisha June.